Shaadhka Polo had iyo jeer waa kuwa ugu jecel wiilasha, gaar ahaan qoob-ka-ciyaarka taagan ayaa noqday dabeecad. Naqshadaynta oo aan waligood dib u dhici doonin waa cunsur jecel nin kasta oo casri ah. Ragga quruxda badan ayaa si fiican isu tusi kara oo is waafajin kara. Waa in ay ahaato mid indho-qabad leh si loo xidho. Dhaqso u fur si aad u hubiso wadnahaaga. Falayshaadhka polowaa qaab aad loo jecel yahay sanad walba. Naqshadeedu waa mid fudud, deeqsinimo leh oo leh qaab xiddigeed. Waxa lagu dhejin karaa surwaalka marka la doono. Sida loo waafajiyo waa mid aad moodo.
Midda u muuqata mid fudud shaadhka polodhab ahaantii waa shayga ugu moodada badan. Aasaaska fudud ayaa ka dhigaya mid ku habboon qaabab kala duwan iyo isku-dhafka moodada.
Nambarka Qaabka: OG321
Tilmaam: Ka-hortagga kaniiniga, Ka-hortagga-u-qabsiga, Laalaab-laab-laab-laab-diidka, La Neef-qaadi karo, Culays, Waara, EL biligleynaya, Cabbirka Dheeraadka ah, Degdeg ah engegan
Miisaanka Dharka: 80-240 garaam
Qalab: 100% Cudbi
Farsamada: DHARKA LA dheehday
Habka Gacan-gacmeedka: Gacan gaaban, gacmo gaaban
Qaabka: WADADA SARE
Nooca Dharka: Poplin
Nooca Alaabta: Funaanado
Nooca Alaabta: adeegga OEM
Habka daabacaadda: Farsamaynta daabacaadda badan
Ilaalinta UV: 50+
Waqti badan: 7-15 maalmood
MOQ: 10 xabbo
Cabbirka baakidhka keliya: 28X35X0.2 cm
Miisaanka kaliya ee guud: 0.350 kg
Tirada (Qeybaha) 1 - 200 201 - 1000 >1000
Est. Waqti (maalmo) 7 15 In laga wadahadlo
Hore: Suudhka dhididka caadiga ah ee jimicsiga Dharka jimicsiga Dharka jimicsiga ragga ku habboon Tababarka Tababarka jimicsiga Dharka iyo orodka ayaa xidha koofiyadaha ragga
Xiga: Dharka hoostiisa Warshado Dharka hoose ee Modal feedhyahanka Dharka hoose ee ragga fudud Jumlo iib ah
Golf wuxuu xirtaa lab
Shaadhka polo ee lab
Shaadhka ragga ee polo
Shaadhka Polo ee dibadda
Dharka sare ee Polo